अमेरिकी सेनाको जागिर छाडेर पोर्नस्टार बनिन् काइली, भनिन्- ‘सेनाको भन्दा यो काम राम्रो’ | Online Nepal
अमेरिकी सेनाको जागिर छाडेर पोर्नस्टार बनिन् काइली, भनिन्- ‘सेनाको भन्दा यो काम राम्रो’
आइतबार, १६ माघ २०७८
काठमाडौं । अमेरिकी सेनामा ५ वर्ष काम गरेकी काइली गुनर नामकी एक युवती पोर्नस्टार बनेकी छिन् । उनले पोर्नस्टार बन्नकै लागि सेनाको जागिर छोडेको बताएकी छन्।
डेलीस्टारका अनुसार काइलीले आफ्नो नयाँ करिअर नयाँ र रोमाञ्चक हुने अपेक्षा गरेकी छिन्। ‘मलाई क्यामेरा फेस गर्ने अनुभव धेरै छ । यस्तोमा वयस्क उद्योगमा जानु मेरो लागि तार्किक कदम लाग्यो । म सधैं यो उद्योगमा काम गर्ने इच्छा राख्थें ।’ उनको भनाइलाई उधृत गर्दै डेलीस्टारले भनेको छ।
रिपोर्टका अन्सुअर काइली अहिलेसम्म २ वयस्क फिल्ममा देखिइसकेकी छिन् । उनी एक चर्चित वयस्क साइटमा पनि निकै सक्रिय छिन् । ग्लोबल फायरपावर्स कम्प्रिहेन्सिभ इन्डेक्स अनुसार अमेरिकी सेनालाई संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली सेना मानिन्छ ।
उनीसँग सेनाको अनुभवको बारेमा सोधिँदा उनले आफूले अमेरिकी सेनामा सबैभन्दा असल मानिसहरुलाई भेटेको बताइन् । उनले अमेरिकी सेनाका सैनिकहरुसँगको मित्रता सबैभन्दा अलग अनुभव भएको बताइन् । उनले आफूलाई मन पर्ने हतियार एम २४० मेसिन गन भएको पनि बताएकी छन्।
अमेरिकी सेनाकाइली गुनरपोर्नस्टार
अमेरिकी प्यासिफिक कमान्डका जर्नेल काठमाडौंमा
अमेरिकी सेनाको जहाज काठमाडौं आयो !
अमेरिका, यूके र जर्मनीसहितका दर्जनौं देशहरुद्वारा आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छोड्न आग्रह
इस्लामिक स्टेटका नेता कुरेशीको मृत्यु, अमेरिकी सेनाले बिछ्याएको थियो यस्तो जाल
नौसेनाको विमान समुद्रमा खस्यो, चीनभन्दा अगाडि पुग्ने यस्तो छ अमेरिकी दाउ
रुस-युक्रेन तनाव : अमेरिकी सेनाले राख्यो साढे आठ हजार सैनिकलाई हाईअलर्टमा
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षका लागि १० जनाले दिए आवेदन
प्रचण्ड परिवारका ६ सदस्य माओवादी केन्द्रीय कमिटीमा
भविश्वर शर्माद्वारा ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को अध्यक्षमा उम्मेदवारी
आयल निगमले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यो-पैसा नभएर इन्धन आपूर्ति रोकिन सक्छ
रुसले उत्तरी ध्रुवमा पत्ता लगायो विशाल तेल भण्डार
हराएका २० मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण
थप ४० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
इण्डिगोका कर्मचारी विरामी बिदा लिएर एअर इण्डियामा अन्तर्वार्ता दिन गएपछि…
इन्स्पेक्टरसम्मको सरुवा, बढुवा गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिऔं : सांसद चौधरी
८ करोड २३ लाख विदेशी विनिमय अपचलन गर्ने पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर
छिटो जन्ती निकालेको भन्दै ५० लाख क्षतिपूर्ति माग
जब मेयरले गोहीसँग विवाह गरे…
कर्मचारीको खातामा तलबको २८६ गुणा बढी रकम गएपछि…
किन आम जनताभन्दा धेरै बाँच्छन् नेताहरु ? यस्तो छ कारण
पूर्ण बहादुर साउद